Chọọchị Buda Buddhist dị n'otu - WRSP
UNIFIED BUDDHIST CHURCH (Na Nhat Hanh)
UNITED FILE BUDDHIST TIMELINE
A mụrụ 1926 Nhat Hanh na etiti Vietnam.
1942 Nhat Hanh wee ghọọ onye mọnk a họpụtara ahọpụta, ebe o meworo nkwa ya na Tu Hieu pagoda.
1949 Nhat Hanh nwetara nhazi zuru oke.
1947 French-Indochina War malitere, ihe omume nke gbara ume nke ukwuu nke ọrụ Nhat Hanh na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
1950s nke mbido Nhat Hanh nyeere aka ịchọta ebe obibi Quang Pagoda na Saigon, ebe o si na 1954 gaa 1961.
Nnam Hanh malitere na 1950s site na ụlọ akwụkwọ Buddha na Saigon iji nyere aka n'ịmepụta ihe ọmụmụ nke ga-ejikọta okpukpe Buddha omenala na nkà mmụta ihe ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa.
Early 1950s Nhat Hanh malitere Akpa Lotus nke mbu nke Oge, bụ magazin e mere iji nyere ndị na-ahụ Buddha aka ịhụ ihe ọhụrụ n'ime omenala.
1956 Nhat Hanh jere ozi dịka onye nchịkọta akụkọ nke All-Vietnam Buddhist Associations nke na-ebipụta na-ebipụta onwe ya.
1957 (Fall) Nhat Hanh, tinyere obere ìgwè ndị enyi, laghachiri n'ugwu Saigon ma guzobe obodo Phuong Boi (Fragrant Palm Leaves).
1961 (Fall) Nhat Hanh nakweere ọnọdụ mmekọrịta na University of Princeton iji mụọ okpukpe tụnyere ọnụ.
1962 (Fall) Nhat Hanh malitere ịkụzi na mahadum Columbia.
1963 (Mmiri) Esemokwu n'etiti ndị Buddha Vietnamese na ọchịchị Diem nke South Vietnam malitere ịmalite. N'April, ọchịchị Diem ahụ chịrị na ndị Buddha apụghị igosi ọkọlọtọ okpukpe ha na ụbọchị ọmụmụ nke Buddha.
1963 (June-October) Nhat Hanh gara obodo ukwu ndị dị na US na-akwado nkwado maka udo na Vietnam.
1963 Association nke ndị mba ọzọ na Vietnamese haziri nchịkọta, nke Nhat Hanh duziri, n'ihu White House.
1963 (November 1) A kwaturo ọchịchị Diem.
1963 (December 16) N'ịhụ ohere maka mmelite nke Buddha, Nhat Hanh laghachiri na Vietnam.
1964 (February) Nhat Hanh guzobere Ụlọ Akwụkwọ Maka Ọmụmụ Buddhist Elu (nke bụ Van Hanh University) na Saigon.
1965 (September) Nhat Hanh guzobere Ụlọ Akwụkwọ nke Ntorobịa maka Ọrụ Nlekọta (SYSS), na Saigon. A na - ejikarị ya tụnyere Udo nke Udo, ihe mgbaru ọsọ nke SYSS bụ ịzụlite ndị ntorobịa n'enyemaka ndị ịda ogbenye na ndị agha ahụ metụtara.
1966 (February 5) Na-edozi ndị isi isii SYSSS ka ha bụrụ ndị òtù, Nhat Hanh malitere iwu okpukpe Tiep Hien, ma ọ bụ Order of Interbeing, òtù nke ndị Buddha bụ ndị na-arụ ọrụ na-enweghị isi site na ha na-edebe iwu iri na anọ, koodu nke ụkpụrụ omume nke Nhat Hanh rụrụ .
1966 (May 2) Nhat Hanh gara United States iji kwuo okwu na seminar na Buddha Vietnamese na Mahadum Cornell, nke na-esochi njem nlegharị anya, mgbe ọ rịọrọ ka ọ kwụsị njedebe nke ime obodo ya.
1966 (June 1) Nhat Hanh kwadoro udo udo ise na ogbako ogbako na Washington, DC, nke mere ka ndị ọchịchị Gọọmenti Gọọmenti Gọọmenti kwupụta ya dị ka onye mgbaba, na-ede mmalite nke afọ anọ nke afọ si n'ala nna ya.
A choputara 1967 Nhat Hanh maka Nrite Nobel Peace site Martin Luther King, Jr..
1969 Nhat Hanh guzobere ndị Buddha Udo nke Udo na okwu Paris Peace na nkwenye nke Chọọchị Buddha nke United Buddhist nke Vietnam.
1969 Nhat Hanh guzobere Chọọchị Buda Buddha (Chọọchị Bouddhique Unifieé) na France.
1975 Nhat Hanh guzobere obodo Sweet Potato dị nso na Paris ebe ya na mmadụ iri na otu biri, na-agbapụ anya n'ihu ọha ma na-achọ ndụ ntụgharị uche, edemede, na ihe ndị ọzọ.
1982 Nhat Hanh guzobere Plum Village dị nso na Bordeaux, France iji mee ka uto Potato.
1982 Nhat Hanh gara New York iji gaa nzukọ nzukọ nke Reverence for Life, ebe ọ matara na mmasị mmasị na ntụgharị uche na United States.
1997 Nhat Hanh guzobere Green Mountain Dharma Center na Maple Forrest Monastery na Vermont.
A kpọrọ 2005 Nhat Hanh ka ọ laghachi na Vietnam mgbe afọ iri atọ na itoolu gasịrị.
2007 (May) Ebe obibi ndị mọnk Green Mountain na Maap Forest Monaste jikọtara ya na Ụlọ Mgbakọ Blue Blue.
A mụrụ Nhat Hanh na obodo nta nke dị na Nguyen Xuan Bao, Central Vietnam, na 1926. Ọ bụ ezie na a maghị obere site na nwata, ọ nwere edere ya na o gosipụtara ihe ịrịba ama nke ịbụ onye a dọtara gaa n'okpukpe dịka nwatakịrị. Dị ka akwụkwọ akụkọ ahụ si dị, ihe ndị metụtara okpukpe ya gụnyere njem njem ya na ụlọ akwụkwọ ya na "ugwu dị nso nke ebe a gwara ya ka ọ dịrị ndụ" (King 2001: 72). Mgbe Nhat Hanh rutere n'ugwu ma chọpụta na enweghị ya, Nhat Hanh wepụtara naanị ya ịchọ ya. Ọ bụ ezie na ọ chọpụtaghị ya, ọ chọpụtara ma ṅụọ mmiri na olulu mmiri nke nwere mmiri doro anya. Ọ ga-emesịa kwuo na n'oge ahụ "a kụrụ mkpụrụ," nke ọ ga-ezo aka dịka mkpụrụ nke iche echiche (Eze 2001: 72). Afọ anọ ka nke ahụ gasịrị, mgbe ọ dị afọ iri na isii, a họpụtara Nhat Hanh dịka onye mọnk Buddha na Tu Hieu pagoda dị nso n'obodo Hue na Vietnam. Ọ bụ ebe a ka ọ natara aha bụ "Thich," nke ndị mọnk na ndị nọn na-ewere na a na-edozi ha "(" Thich Nhat Hanh ", nd).
Nhat Hanh zụrụ azụ na omenala Zen Buddha, nke gụnyere "ịmụ ihe odide oge ochie nke Buddha n'asụsụ Chinese, na-eji usoro enyemaka nke aka (media)kung-an) ma na-etinye ọtụtụ awa iji na-eme ihe omume nkịtị "(zazen), bụ ihe dị mkpa nke omenala Zen. Otú ọ dị, mgbe ọ natara ụfọdụ agụmakwụkwọ n'Ebe Ọdịda Anyanwụ tupu ya abanye n'ụlọ obibi ndị mọnk ahụ, Nhat Hanh hụrụ onwe ya na-emegide ọtụtụ omenala ndị dị na mmalite nke ọzụzụ ya, gụnyere ntinye ederede nke amaokwu nke ọ na-ewere dị ka oge ochie na enweghi ụkọ ezi. Ọ bụ ezie na ọ ga-emesị nakwere omenala Buddha omenala ma kwado ya n'ụzọ zuru ezu na 1949, mmegide ya na ọhụụ maka mgbanwe dịgidere na ya ma gosipụta ike na-arụ ọrụ ya.
Ka agha French na Indochina malitere na Vietnam na mmalite nke 1950s, Nhat Hanh hụrụ ohere maka ịmalite ịrụ ọrụ iji mee ka okwukwe Buddhist dị na mba ahụ dị ọhụrụ. N'ịkọwa ụkpụrụ Buddha bụ isi nke impermanence, ọ na-eche na ọ bụrụ na okpukpe ọ bụla na-ejigide ya, ọ ghaghị ịgbanwe ma mee ka ụwa dị iche iche gbanwere. Ọ gbalịrị ịgbanwe usoro ọdịnala ahụ na ime ka ọ bụrụ ndị na-enweghịzi oge maka ọzụzụ nke ndị mọnk na ndị nwe ụlọ Zen. Kama nke ahụ, ọ hụrụ mkpa ọ dị maka usoro nke ndị na-akwado ya nwere ike isi tinye Buddhist n'ime ndụ ha kwa ụbọchị, nke mere ka o mepụta echiche nke Buddha a nabatara. N'ime 1950s, Nhat Hanh rụrụ ọrụ n'ịhụ ọhụụ a site na ịmalite magazin nke isiokwu ya bụ Akpa Lotus nke mbu nke Oge; na-eje ozi dị ka nchịkọta akụkọ nke oge abụọ, Buddha Vietnamese, nke Òtù Buddhist All-Vietnam bipụtara; na ngalaba-ịtọ ntọala An Quang Pagoda na Saigon, ebe o si na 1954 gaa 1961. E nwere mmegide mmegide nke Nhat Hanh site n'ime na karịa ọdịnala nke okpukpe ya. Na nzaghachi a na-eguzogide ya, ya na ọtụtụ ndị ọzọ "gawara n'ugwu ndị dị nso na Saigon" n'oge ọdịda nke 1957, bụ ebe ha guzobere "obodo" na-akpọ Phuong Boi (Eze 2001: 76).
Na 1959, n'agbanyeghi iguzogide nduzi ya, Nhat Hanh nakweere ihe a na-enye "ịmụ ihe na ịkụziri okpukpe tụnyere Columbia na Princeton Universities" wee hapụ Vietnam maka United States ("Onye Nkụzi Anyị") Ọ bụ ezie na Nhat Hanh dere obere oge a, o kwuru na nke a bụ "mmalite nke oge mbụ" maka ya mgbe ọ na-atụ ụjọ maka ọdịnihu nke ala nna ya na-alụ agha na ihe ga-eme ka mmadụ bụrụ nke ụmụ mmadụ na-enwewanye mmetụta, na-eme ka ndị mmadụ ghara inwe nsogbu ihe ọ na-ezo aka dịka "" ezi onwe gị "(Eze 2001: 77). Oge egwu ya na nkụda mmụọ ya yiri ka ọ kwụsịrị na 1963 mgbe "ndị ọrụ ibe ya na Vietnam gwara ya ka ọ bịa n'ụlọ iji soro ọrụ ha kwụsị agha US-Vietnam" ("Onye Nkụzi Anyị").
Mgbe ọ laghachiri Vietnam, Nhat Hanh guzobere Institutelọ Ọrụ Maka Mmụta Buddhist Elu, mechara kpọọ Mahadum Van Hanh, yana obodo nyocha nke ga-emesị bụrụ Schoollọ Akwụkwọ nke Ntorobịa maka Ọrụ Nlekọta (SYSS). SYSS, nke akpọrọ "obere Peace Corps" na mgbasa ozi ndị America, raara onwe ya nye inye aka nye ndị agha ahụ metụtara, iwughachi obodo ndị gbara bọmbụ na iwu ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ ahụike, yana oke ịda ogbenye. Ka agha ahụ biri, ndị mọnk 10,000 na ndị nkịtị so na otu ahụ.
Na February 5, 1966, Nhat Hanh guzobere usoro okpukpe ọhụrụ, nke ọ kpọrọ Tiep Hien, ma ọ bụ Ụdị Nkwado, mgbe ọ họpụtara ndị isi isii nke SYSS. Usoro nke Interbeing, "nke ndị mọnk na ndị nọn, ndị nkịtị na ndị nwanyị na-eme ihe na-ejikọtaghị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, mana mmetụta ya na mmetụta ya nwere mmetụta miri emi n'ime obodo ha" ebe ọ bụ na o nyere echiche nke Buddhism etinye aka (Brown 2004). Ndị òtù Order nwere njikọ chiri anya "site na ịgbaso iwu iri na anọ, nke Nhat Hanh dere iji were ọnọdụ ọtụtụ narị iwu nke chịkọtara ndụ ndị mọnk Buddhist na ndị sista karịa afọ 2,500" (King 2001: 83). Prekpụrụ ndị a bụ nsụgharị nke nkà ihe ọmụma Buddha nke oge ochie nke Nhat Hanh kwenyere na ya na ụwa nke oge a. N'oge na-adịghị anya mgbe e guzobere Order of Interbeing, Nhat Hanh gara United States ọzọ ịga njem na-ekwu okwu na mba ahụ, nke malitere na Mahadum Cornell, na-akwado nkwụsị na Vietnam. Otu ọnwa n'ime njem ya, Nhat Hanh gosipụtara atụmatụ udo ise ya na nnọkọ ogbako na isi obodo. Ọ rịọrọ gọọmentị US ka ha mee ọtụtụ ihe nke gụnyere ịkwụsị bọmbụ nke ndị a na-atụ anya na Vietnam, ịnakwere ọnọdụ ndị agha na-agbachitere ya, na inye ego iji wughachi mba. Mgbe ịnụrụ ma kpalie arịrịọ ike nke Nhat Hanh maka udo, Martin Luther King, Jr. họpụtara ya maka Nobel Peace chọr'inwe na 1967. Mana, a nabataghị ozi ya nke ọma n'akụkụ niile, ndị South katọrọ ya ozugbo Gọọmentị Vietnamese dị ka onye sabo, nke chụpụrụ ya pụọ ​​n'obodo nna ya.
N'afọ ndị mbụ ọ dọọrọ n'agha, Nhat Hanh nyeere aka ịchọta ndị nnọchi anya udo nke Buddhist Vietnamese na aro nke isttù Buddha Buddha Vietnam. Ndị nnọchi anya Udo ahụ rụrụ "ụzọ maka ozi sitere na Vietnam gaa n'akụkụ ụwa niile na isi iyi maka enyemaka enyemaka maka ụmụ mgbei na Vietnamese na ndị ọzọ nọ na nsogbu" (King 2001: 89). Ikekwe oru ngo a kacha wee mara nke ndị nnọchi anya ahụ gụnyere ịkwado ụmụaka na-enweghị nne na nna n'ihi agha ahụ; A gwara ndị na-akwado ha ka ha nye onyinye na-aga n'ihu iji kwado nwatakịrị ha na-akwado. Mmemme a gosipụtara nnukwu ihe ịga nke ọma. N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma ya na mbọ enyemaka Vietnam War, Nhat Hanh nwere nkụda mmụọ n'ihi enweghị ike ịmetụta usoro ahụ site na obodo ya, ọ banyekwara oge ịlaghachi.
Nhat Hanh zụrụ otu ụlọ na mpaghara ala ubi South nke Paris nke ya na ọtụtụ ndị ọrụ ibe ya malitere imegharia na 1973 na ebumnuche nke ịtọ ntọala obodo na nyocha nke onwe na echiche onwe onye. Ya na mmadụ iri na otu, ọ kwagara n'obodo na 1975 iji chọọ ndụ dị mfe. N'ịkpọ obodo ahụ ụtọ Ụtọ (Les Patates Douces), ha kwadoro ihe Nhat Hanh ga - akọwa dị ka ndị na - eguzogide ya, lekwasịrị anya n'ịchọpụta onwe gị n'ime usoro. Dị ka obodo ime mmụọ ndị gara aga, Sweet Poteto na-emeghe nye ndị mmadụ nakwa dịka anụ ọhịa, ọ na-adọta ọtụtụ ndị mmadụ ngwa ngwa, karịa obere ala ahụ nwere ike ịkwado. Iji nweta ọganihu nke Ụtọ Ọkụ, Nhat Hanh na Chan Khong guzobere Plum Village na 1982 na Bordeaux, France. Mbụ ahia ala zitere ala iri abuo ma tinye ulo ato ato di n'ime ebe a. A zụrụ ala nke abụọ, Upper Hamlet na Lower Hamlet. A na-ede aha obodo ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-enye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke plums toro ma na-egbute n'ebe ahụ. Ahịhịa 1,200 na-emepụta mkpụrụ isii tọn kwa afọ site na 1992. Ndị obodo ahụ na-akwado ọrụ enyemaka mba ụwa. Plum Village, na mgbakwunye na ije ozi dị ka "ndị na - eguzogide" dị ka nke Sweet Potato, bụ nke mere ka usoro mgbasaozi na njedebe onwe onye ghọọ ebe mgbagha. Nhat Hanh ga-emecha mezie ihe omume afọ anọ iji zụọ ndị mọnk, ndị nọn, na ndị nkịtị nke mba dị iche iche ka ha bụrụ ndị mmadụ n'otu n'otu na-enwe mmetụta na obodo ha. Ndị obodo kwetara na otu narị mmadụ n'oge okpomọkụ nke mbụ ya ma gbasaa iji tinye 1991 karịa mmadụ otu puku mmadụ. Obodo dị n'ebe ndịda Farani, ebe Thich Nhat Hahn bi na 2007, wee bata n'ime obodo ise ma gụnye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mọnk na ndị nọn na-anọ karịa n'oge ọ dị na nwata.
Nhat Hanh weghachiri anya n'ihu ọha na nhazi nke Plum Village. Ọ gara United States na 1982 iji gaa nzukọ asọpụrụ maka ndụ na New York. Mgbe ọ gara njem a, ọ bịara mara banyere mmasị gbasara ọdịbendị nke ọdịnala na ntụgharị uche na United States. Mgbe oge nkwadebe gasịrị, ọ banyeghachiri United States na-eduzi usoro isiokwu ma na-alaghachi na Buddhist Nabatara. Mmeghachi omume ziri ezi nye ihe ngosi ya mere ka ọ bụrụ na ọ na-eduga ya na ebe obibi ọhaneze gburugburu ụwa. N'oge a, o bipụtara ọtụtụ ọrụ, gụnyere Ịzụlite Uche nke Ịhụnanya, nchịkọta okwu ndị e nyere na Plum Village, ma Ibiri Buddha, Ibi ndu Kraist na 1995, nke e bu n'uche itinye aka na nkwurịta okwu Buddha-Christian.
Nhat Hahn guzobere ọtụtụ obodo na ebe ntụgharị uche na United States n'oge njedebe nke 1990s na mmalite 2000s, gụnyere Green Mountain Dharma Center na Ebe obibi Mkpụrụ obibi Maple Forest dị na Vermont, Ebe obibi Ndị mọnk Deer Park dị na California, na Ebe obibi Miibi Blue Cliff na New York. A kpọghachiri ya na Vietnam na 2005, ọ kwagara n'ala nna ya, ebe ọ bi ugbu a, na 2007. Mgbe ọ laghachiri, ọ "edozi [d] ... nnukwu mmadụ atọ dị nnukwu mkpa na mpaghara obodo nke mba ahụ na-enye ọtụtụ nde mmadụ ndị nwụrụ anwụ n'agha ahụ na ndị na-adị ndụ (" Our Teacher, "nd ).
Nhat Hanh nke na-eme ka ọ bụrụ "Buddha a kwadoro" iji kọwapụta ihe ndị Buddha kwuru na ụwa nke oge a na ndụ kwa ụbọchị nke ndị na-akwado ya. Okpukpe Buddha bụ usoro mgbanwe n'ime usoro omenala Zen nke a zụrụ Nhat Hanh, ya mere, ọ nwere ọtụtụ ihe yiri nke Buddha Zen na Mahayana.
Echiche atọ dị n'etiti ime Buddhist na-ekere òkè: iche echiche, ịkwado, na aka (Eze 2000). Echiche bụ isi n'ime Buddha nke a na-akwado, nke bụkwa ihe dị mkpa na Buddha n'ozuzu, bụ nke uche. Dị ka Nhat Hanh si kwuo, uche, ma ọ bụ ịmara nke ọma ugbu a bụ "nanị ụzọ isi nweta ezi udo, ma n'ime onwe ya ma n'ụwa" ("Thich Nhat Hanh" 2009: 3). Echiche nke uche, ọ bụ ezie na ọ dị oké mkpa maka nghọta nke usoro ahụ, enweghi echiche kwekọrọ na Bekee. Ya mere, Nhat Hanh jiri ihe atụ mee ka ọ pụta ìhè. Ọ na - ekwu na ndị mmadu, dịka ọmụmaatụ, mgbe ịṅụ tii na onye ọzọ, "na-enwe mkparịta ụka nke na anyị amaghị ihe anyị na - eme;" Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị ga - echebara ihe anyị na - eme, anyị ga - tii. Ọzọkwa, ọ na-ekwu na "mgbe e mesịrị, na ịtụgharị uche na ahụmịhe ahụ, ị ​​nwere ike ịnwe ohere iji tụlee ya ma jiri ya tụnyere ahụmahụ ndị ọzọ dị otú ahụ, ma site n'oge ahụ ahụmahụ ahụ adịkwaghị. Ihe fọdụrụnụ bụ echiche nke ahụmahụ ahụ, "ma n'oge ahụ, ọ bụrụ na a na-emeso ya n'uche, ọ bụ naanị ahụmahụ dị, na-enweghị echiche ọ bụla banyere ahụmahụ (Eze 2001: 100).
Nhat Hanh na-ekwu na site n'ichebara ihe ga-eme ka ọ pụta ìhè na nkwenye nke njikọta, ma ọ bụ ịmekọrịta, nke ihe niile karịrị ego. Dị ka Mc si kwuo ya, “ihe niile dị ndụ bụ ihe mejupụtara site na mmekọrịta ha na ndị ọzọ na enweghị onwe ha, ọdịdị na-adịgide adịgide na nke onwe ha” (McMahan 2008: 132. Ọ gara n’ihu, sị: “Itinye aka n’echiche a pụtara na ihe niile - mmadụ, okwute, mmiri - dabere na ihe ndị na-abụghị mmadụ, na-abụghị oke okike, mmiri na-abụghị mmiri.Ọrịa ndị a niile na-agwakọta n'ụdị protin nke ga-agbasasị wee bụrụ ihe ọzọ, ihe niile dị n'ime bụ otu n'ime ọnụọgụ na-enweghị njedebe nke ụwa niile na-ewere. ngosipụta ya na-adịghị agwụ agwụ, dị ka ebili mmiri na mmiri (McMahan 2008: 131) Ọbụna ọnwụ bụ naanị mgbanwe site n'otu ụdị ndụ gaa na nke ọzọ. Nghọta a banyere ịmekọrịta nwere ike itinye n'ọrụ na ndụ kwa ụbọchị yana ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ahụ mgbe mmadụ nọ maara ihe na-eme na mpụga nke onwe nke ego, ọ na-amata ma nwee mmetụta nke oke nhụjuanya n'ụwa. worldmara a ga-eduga na ime ihe; enwere ihe dị oke mkpa maka ndị mmadụ n'otu n'otu itinye aka. Dị ka McMahan na-ekwu (2008: 161), "O doro anya na ebumnuche ya bụ iji ozizi nke itinye ọnụ na-agba ume ka ọha mmadụ were ọrụ maka ọnọdụ nke ndị na-enweghị nsogbu,"
Nhat Hanh achọpụtawo Iwu iri na anọ maka okpukpe Buddha, nke gụnyere "ịkwanyere ndụ, mmesapụ aka, omume mmekọahụ kwesịrị ekwesị, nkwukọrịta ịhụnanya, na ịzụlite ndụ ndụ siri ike," ihe niile na-esite na ndụ ibi ndụ ("Venerable Thich Nhat Hanh Tù: Obodo nke Ncheta Ndụ nd: 2). Iwu iri na anọ bụ ebe etiti iwu ya. Re-enugharia site na iwu ndi mbu nke kpuziri ndu ndi mọnk Buddha rue afọ 2,500, ntuziaka nke Hanh, nraranye nke ndi otu ndi choro choro, gua (“Iwu nke 14 nke Nhat Hahn” nd.):
Ekperela ikpere arụsị banyere ma ọ bụ kegide na nkuzi ọ bụla, echiche, ma ọ bụ echiche, ọbụlagodi ndị Buddha. Usoro echiche niile na-eduzi ụzọ; ha abughi ezi okwu.
Echekwala na ihe ọmụma ị nwere ugbu a enweghị mgbanwe, eziokwu kachasị. Zere ịdị na-enwe echiche dị warara na agbụ iji gosipụta echiche. Mụta ma mee mgbakwunye na mgbakwunye na echiche iji meghee iji nweta echiche ndị ọzọ. A na-achọta eziokwu na ndụ ma ọ bụghị naanị na nghọta nke echiche. Dịrị njikere ịmụ ihe na ndụ anyị niile na ịhụ eziokwu n'ime onwe gị na ụwa n'oge niile.
Enwela mmanye ndị ọzọ, gụnyere ụmụaka, n'ụzọ ọ bụla n'ụzọ ọ bụla, ịnakwere echiche gị, ma ọ bụ site na ikike, iyi egwu, ego, mgbasa, ma ọ bụ ọbụna agụmakwụkwọ. Agbanyeghị, site na mkparịta ụka ọmịiko, nyere ndị ọzọ aka ịjụ oke ịnụbiga ọkụ ọkụ ọkụ na ịghara ịkọ ihe.
Emela ka ndi mmadu taa ahụhụ ma obu mechie anya gi tupu ị taa ahụhụ. Echefula na ịdị adị nke ndụ nke ụwa. chọta ụzọ isi soro ndị na-ata ahụhụ n'ụzọ niile, gụnyere ịkpọtụrụ onwe onye na nleta, onyonyo, ụda. Site n'ụzọ dị otú a, teta onwe gị na ndị ọzọ n'eziokwu nke nhụjuanya n'ụwa.
Akpakọba akụ na ụba ebe agụụ na-agụ ọtụtụ nde mmadụ. Ejila ndụ gị ama, uru, akụnụba, ma ọ bụ ihe anụ ahụ. Na-ebi ndụ naanị ma soro ndị nọ na mkpa kerịta oge, ike, na ihe onwunwe.
Ewela iwe ma ọ bụ ịkpọasị. Ozugbo iwe na ịkpọasị malitere, mụọ ntụgharị uche na ọmịiko iji ghọta nke ọma ndị kpatara iwe na ịkpọasị. Mụta iji anya ọmịiko lee ndị ọzọ anya.
Echefula onwe gị na mgbasa na gburugburu gị. Mụọ iji ume iku ume iji nwetaghachị ahụ na uche gị, iji uche na-eme ihe, na ịzụlite uche na nghọta.
Ekwula okwu nke nwere ike ime ka esemokwu ma mee ka obodo daa. Mee ike gị niile idozi na idozi esemokwu niile, agbanyeghị obere.
Ekwula ihe na-abụghị eziokwu maka ọdịmma onwe gị nke iji masị ndị mmadụ. Ekwula okwu ndị na-akpata ntụgharị na ịkpọasị. Akwusa ozi ọma na ịmaghị nke ọma. Akatọla ma ọ bụ katọọ ihe ndị ị na-ejighị n’aka. Na-ekwu eziokwu mgbe niile ma na-arụpụta ihe mgbe niile. Nwee obi ike ikwu okwu banyere ọnọdụ ikpe na-ezighị ezi, ọbụlagodi mgbe ịme nke ahụ nwere ike itinye nchekwa gị.
Ejila obodo Buddhist mee ihe maka onwe gị ma ọ bụ uru gị, ma ọ bụ gbanwee obodo gị ka ọ bụrụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otu okpukperechi kwesiri, iguzo doro anya megide mmegbu na ikpe na-ezighi ezi, ma gbalisi ike igbanwe onodu a na etinyeghi aka n'agha.
Adịla ebi na ọrụ nke ga-emebi ụmụ mmadụ na okike. Etinyela ego na ụlọ ọrụ ndị na-anapụ ndị ọzọ ohere ha ịdị ndụ. Họrọ ọrụ ga - enyere gị aka ịmata ezigbo ọmịiko gị.
Egbula. Ekwela ka ndị ọzọ gbuo. Chọta ihe ọ bụla ga-eme ka chebe ndụ na igbochi agha.
Enweghi ihe ọ bụla kwesịrị ịbụ nke ndị ọzọ. Na-asọpụrụ ihe onwunwe nke ndị ọzọ mana gbochie ndị ọzọ ịba ọgaranya site na nhụjuanya mmadụ ma ọ bụ nhụjuanya nke ndị ọzọ.
Emebila ahụ gị. Mụta iji ugwu na-ejikwa ya. Elela ahụ gị anya dịka naanị ihe eji arụ ọrụ. Chebe ike dị mkpa (mmekọahụ, ume, mmụọ) maka mmezu nke Wayzọ ahụ. Mmekọahụ ekwesịghị ime na-enweghị ịhụnanya na ntinye. Na mmekọrịta nwoke na nwanyị mara maka nhụjuanya n'ọdịnihu nke nwere ike ịkpata. Iji chebe obi ụtọ nke ndị ọzọ, kwanyere ikike na nkwa nke ndị ọzọ. Mara nke oma oru nke iweta ndu ohuru n'ime uwa. Na-atụgharị uche na ụwa nke ị na-ewetara mmadụ ọhụrụ.
Nhat Hahn dọrọ ndị na-eso ụzọ ya aka na ntị ka ha ghara ijide onwe ha n'ụkpụrụ nke izu oke, na-ekwupụta "Ekwenyela na m na-eche na m na-agbaso iwu nke ọ bụla n'ụzọ zuru oke. Amaara m na ada m n'ọtụtụ ụzọ. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike mezuo nke ọ bụla n'ime ha. Agbanyeghị, m ga-arụrịrị ọrụ iji nweta ebumnuche. Ndị a bụ ihe mgbaru ọsọ m. Enweghị okwu nwere ike dochie omume, naanị omume nwere ike ịme okwu "(" Iwu 14 nke Nhat Hahn "nd).
Ihe mgbaru ọsọ nke okpukpe Buddha nke Nhat Hanh bu ime ka ndi Buddha di iche iche di iche iche di iche iche. Ihe niile A na-ahazi ememe Buddha n'usoro ịdị ndụ; Otú ọ dị, ụzọ ha si eduzi dịgasị iche site n'ọdịbendị na ọkwa n'ime ọdịnala ahụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịtụ anya na ndị ọrụ ọnụahịa ga-eme ọtụtụ ihe ndị ruuru mmadụ, gụnyere ime nnupụisi. Ha nwekwara ike na-enwe uche site na ịmara "ihe anyị na-eme," nke dịka Nhat Hanh, nwere ike ime "'mgbe ị na-eje ije, na-eri nri, na-ekwu okwu, na-arụ ọrụ na n'ọkwá na ọrụ niile" (King 2001: 73). Ọ bụ ezie na ememme ndị otu onye mọnk ma ọ bụ onye bi na otu n'ime obodo Nhat Hanh nwere ike ọ dị iche, ha ka ga-eche otu nkà ihe ọmụma dị otú ahụ. Ihe ndị bụ isi gụnyere ume iku ume; Ntughari nke ndi anwu; nri, nke nri nke ndị na-akpọ sangha na-enyekarị nri; kwa izu dharma mkparịta ụka; a na-emechi nkịtị n'abalị; nakwa dịgasị iche iche nke ntụgharị uche, gụnyere nnọchiteanya ọnụ, ịgagharị ntụgharị uche, na ịtụgharị uche ntụgharị uche.
N'ikwekọ na omenala Zen Buddha, ma ndị mọnk na ndị nkịtị bi na Plum Village na-atụgharị uche kwa ụbọchị. A na-akụ ụda mgbịrịgba na-egosi mmalite nke nnọkọ. Ndị na-eto eto na-ekere òkè na oge ichetara ntụgharị uche ntụgharị, na-esochi ntụgharị uche (Kinh Hanh), tupu itinye oge ọzọ nke ntụgharị uche. Ịtụgharị uche, na-esite na nkwenkwe na "mgbe anyị na-amakụ, obi anyị jikọọ na anyị maara na anyị abụghị ndị mmadụ dị iche." Ọ na-amalite site na mmadụ abụọ na-akpọrọ ibe ha tupu ha ejiri ume ume atọ wee nabata ha ogologo ogologo atọ ọzọ. ume ("Art of Mindful Living" 2009). Mkpụrụ ume atọ a na-eme n'ime hugharị na-egosi ala atọ nke mmata. Nke mbu bụ na onye ya onwe ya "nọ ugbu a na anyị nwere obi ụtọ;" nke abụọ bụ na onye nke ọzọ nọkwa na-enwe obi ụtọ; na nke ikpeazụ bụ na ha abụọ "nọ ebe a, ugbu a na ụwa a, anyị na-enwe ekele miri emi na obi ụtọ maka nnọkọ ọnụ anyị" ("Art of Mindful Living" 2009).
A na-ahụ ihe na-emetụ aka na njikọta ọnụ na otu dị n'etiti ndị a gosipụtara na ịtụgharị uche na Plum Village sangha na echiche nke "ahụ nke abụọ." Na omume a, mmadụ na-ele ahụ ya anya dika "ahụ mbụ, " ma na-ahọrọ onye ọzọ nọ n'ime obodo ka ọ bụrụ "akụkụ nke abụọ" ya, wee lelee onye ahụ dị ka "akụkụ nke onwe anyị na anyị chọrọ ịṅa ntị na ilekọta" ("Art of Mindful Living" 2009). Onye ahọrọ, n'aka nke ya, na-ahọrọ onye ọzọ ka ọ na-anọchite anya ahụ ya nke abụọ, ruo mgbe obodo dum na-etolite gburugburu ilekọta ibe ha.
Ndị obodo nke Plum Village na-emetụkwa aka na-emetụ n'obi nke ụwa nke onye so na-esonyere ya aka, na-anọchite anya ifuru lotus, tupu ọ gbadaa ahụ ma metụ ihu n'egedege ihu. Mgbe ahụ, onye ahụ na-ekewa aka, na-etinye aka na ihu, na-anọchite anya "oghere nye nkume atọ, Buddha, Dharma, na Sangha" ("Art of Mindful Living" 2009). Omume a abụghị nanị omenala Buddha nke njikọta nke ihe niile, ma a na-emekwa iji gbochie nhụjuanya na mmetụta nke ịhapụ ndị ọzọ, gụnyere ndị nna ochie, ndị nne na nna, na ndị enyi.
Kemgbe ndụ ya, Thich Nhat Hanh eguzobewo ma kwadobe ọtụtụ obodo, ebe obibi ndị mọnk, na okpukpe na òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke gosipụtara ma nye ihe dị iche iche n'echiche ya maka ụdị okpukpe Buddha. Nke mbụ n'ime ìgwè ndị a, bụ An Quang Pagoda na Saigon, tọrọ ntọala na 1950 dị ka ụlọ akwụkwọ ntụziaka nke ndị mọnk Buddha nke Vietnam. Na 1965, Nhat Hanh guzobere Ụlọ Akwụkwọ nke Ntorobịa Maka Ọrụ Na-elekọta Mmadụ (SYSS), "na-adabere ... na ụkpụrụ Buddhist nke ndị na-abụghị ime ihe ike na ọmịiko," ka a kọwara dị ka "onyinye kasị ukwuu nke Nhat Hanh" na omenala ndị Buddha a kwadoro n'oge ya oge, n'agbanyeghị nnukwu mgbalị ("Nhat Hanh 2009: 2). N'ịbụ ndị nọ na Saigon, ndị òtù SYSS nwere ọrụ maka "ịzụlite akụ na ụba nke aka ha na inye maka agụmakwụkwọ na nlekọta ahụ ike" (King 2001: 81). Ọzọkwa, ndị obodo na-enweta ọzụzụ n'oge ha "wughachiri obodo nta bọmbụ, guzobe ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ, mee ka ezinụlọ na-enweghị ebe obibi guzobe, na ịhazi ụlọ ọrụ ugbo" na mgbakwunye na iduzi ha n'ịkwado onwe ha, otu akụkụ pụtara ìhè nke obodo Nhat Hanh ("Thich Nhat Hanh "2009".
Ewubere iwu okpukpe nke Tiep Hien, ma ọ bụ Nkwekọrịta, na 1966 mgbe Nhat Hanh họpụtara iri na otu nke Ụlọ Akwụkwọ nke Ntorobịa maka Ọrụ Ọrụ. Usoro nke ikwu okwu yiri ebe obibi ndị mọnk omenala na-eme ememe site na-achọ ka ndị òtù na-eburu ma kwupụta ụkpụrụ iri na anọ, tụgharịa uche, ma gaa okwu Dharma. Otú ọ dị, a "tụụrụ ime ya dịka ọ bụghị onye ụkọchukwu ma ọ bụ usoro iwu," kama "obodo nke ndị Buddha na-arụ ọrụ ... na-etinye aka na ndụ nkịtị" (King 2001: 82). Nzukọ nke usoro Tiep Hien na-egosipụta ma eleghị anya akụkụ kachasị ama nke mpaghara dị iche iche nke Nhat Hanh, na ha enweghị usoro. Ebe a na-ahazi ebe obibi ndị mọnk nke Buddha na ndị nlekọta, ndị obodo ndị dị ka Phuong Boi, Order of Interbeing, na Sweet Potato enweghị njikọ na-ejikọta ọnụ.
Obodo Plum, nke hibere na 1982 na Bordeaux, France, bụ ezi ihe atụ nke okpukpe Nhat Hahn nke na-emezighị emezi obodo. Emepụtara ya ka o nwee ike ito uto. Ihe mejuputara ya bu "sangha nke ihe dika ndi mọnk nke 150, ndi nọn na ndi bi na ya" tinyere ndi nleta nke ndi mba ozo, ndi na abughi Buddha ("The Community of Mindful Living"). Ọnụọgụgụ ndị ikpeazụ a na-anọchite anya ebumnuche obodo ahụ dị ka ebe mgbagha. Plum Village na-akwado otu puku mmadụ dị otú ahụ site na 1991 wee ghọọ ebe obibi Nhat Hanh ruo mgbe ọ laghachiri Vietnam na 2007. Obodo ahụ anọgidewo na-eto eto na nhụsianya kemgbe mmalite ya, nke dugara Nhat Hanh ịchọta nwanne nwanyị n'ime United States.
Obodo abụọ dị mkpa na United States bụ Ebe obibi Ndị mọnk Deer Park na Ebe obibi Miibi Blue Cliff. Ewubere ebe obibi ndị mọnk Deer Park na July nke 2000 na 400 acres nke ala dị na Escondido, California dị ka mgbatị mba nile nke Plum Village. Deer Park nwere ụlọ abụọ dị iche iche: Solidity Hamlet, ụlọ ndị mọnk na ndị nkịtị, na Clarity Hamlet, nke ụlọ ndị nọn na ndị nwanyị lụrụ. Nhat Hanh mere ka o nwee obodo dị otú a, nke dị obere na iri asatọ acres nke ndagwurugwu Hudson na New York, nke ọ gụrụ ebe obibi ndị mọnk Blue Cliff. Dịka ebe obibi ndị mọnk Deer Park na obodo Plum, Blue Cliff bụ ebe obibi nke ndị mọnk na ndị nkịtị na-anakwere "onye ọ bụla chọrọ ịmụta ma zụlite nkà na omume nke Buddha na-etinye aka site n'iche echiche" ("Community of Mindful Living "Nd). Ọ bụ ezie na a ka na-azụlite obodo abụọ a, ha enwetawo ihe ngosi dị ukwuu, na-adọta ma ndị Buddha na-arụ ọrụ na ndị ọkachamara na-achọ ịmata ihe n'oge afọ ole na ole ha ji eme ihe ("Community of Mindful Living").
Chọọchị Buda Buddhist, Inc. (UBC) na United States na Chọọchị Buda Buddha dị na France (Eglise Bouddhique Unifieé) bụ òtù ụmụnna nwanyị. UBC dị na United States bụ IRS nke a kpọrọ IRS dịka nzukọ 501 (c) (3) nke na-abaghị uru. Ndi otu umuaka nwanyi abuo bu ndi isi ochichi nke Plum Village, ebe obibi ndi obula Blue Cliff, ebe obibi ndi ozo Deer Park, Community for Mindful Living, na Parallax Press. Ndị ọzọ òtù mmekọ UBC na-agụnye ụlọ nsọ Dharma Cloud na Ụlọ Dharma Nectar na 1988, na Ụlọ Oriri nke Obiọma Obiọma na 1995. E nwere ebe a na-eme ememe na US Germany, Hong Kong, na Thailand.
Nhat Hanh Nwunye amawo ihe isi ike abuo site n'oru oru ya: mkpesa site na ndi Buddha maka echiche ndi nduzi ya na nsogbu ndi ozo site na ndi mmegide ochichi na Vietnam na United States.
Nhat Hahn na-ese okwu banyere ọdịnihu ya dị ka onye mọnk ọbụna mgbe ọ na-azụ ọzụzụ dịka onye mọnk na Tu Hieu Monastery. Mgbe Nhat Hanh banyere ebe obibi ndị mọnk ahụ ozugbo, ọ dị mkpa ka ọ gbanwee ọdịnala ahụ, nyochaghachi nke ga-ebu Buddha n'ime ụwa nke oge a, ya mere, ọ jụrụ ajụjụ ọ bịara hụ dị ka usoro ihe ochie nke ọmụmụ Zen Buddha. Otú ọ dị, a hụrụ mmegide ya n'ụzọ na-emegide ozugbo n'ime ụlọ obibi ndị mọnk. Ọ bụ ezie na ọ nọgidere na-enye ọzụzụ ma soro na-eme omume Zen omenala, n'oge ọzụzụ ya nile, ọ dịghị mgbe ọ hapụrụ echiche ya maka mgbanwe.
Mgbe ọ hapụsịrị ebe obibi ndị mọnk wee malite itinye echiche ya na-agbanwe agbanwe, o zutere nkwenkwe Buddhist ogologo oge maka ịchụso nghọta onye ọ bụla. N'ụzọ dị iche, òtù okpukpe Buddha ya a kwadoro mesiri ike na "ndị Buddhist na-etinye aka n'ọrụ na nsogbu ya" (Brown 2004: 1). Nke ahụ bu, o mesiri mmekọrịta na obodo. Site na onye Buddhist akwadoro, iji ruo nirvana, onye ga-enyere aka na-edu ndị ọzọ na nghọta.
Ọ bụ ezie na Vietnam anọwo n'ụlọ nke ọdịnala ọdịnala dịgasị iche iche, n'oge ndụ Nhat Hanh, gọọmentị Vietnamese na-egbochi nkwupụta okpukpe, na-egbochi ọrụ okpukpe niile na ememe nke na-egbochi ikike gọọmentị na amụma. Ndị otu Buddhist nke Nhat Hanh gbara, na-ejikọ nkwenkwe okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mere ka o doo anya na gọọmentị.
O mekwara ka mmegide sitere n'aka ndị obodo Buddha dị na Vietnam. Nhat Hanh abụwo onye a ma ama na nhazi nke Buddhist Chọọchị Buddhist nke Vietnam (UBCV) kemgbe ọ malitere na 1964. Chọọchị kwadoro ọrụ enyemaka dịgasị iche iche ma kwalite omume okpukpe Buddha. Otú ọ dị, UBCV si n'ebe Nhat Hanh nọ pụọ, na-agọnahụ ya nkwado ego maka obodo ya dịgasị iche iche ma wepụ ya site na ndị University Van Hanh, nke o nyeere aka ịchọta, ma nke ọ kụzikwaara kemgbe mmalite ya. UBCV kwuru maka esemokwu nke gbara gburugburu Nhat Hanh na òtù okpukpe ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka ihe mere kpatara ya na ọrụ ya.
Ya mere, tinyere ọtụtụ ndị isi Buddha ndị ọzọ, ya mere, a chụpụrụ Nhat Hanh na Vietnam, a hapụ ya site na ala nna ya. ma ndị ọchịchị South Vietnamese na ndị Kọmunist. A machibidoro Nhat Hanh ịlaghachi na Vietnam mgbe ọ malitere njem nlegharị anya nke United States na 1966, na-arịọ ka ọ kwụsị njedebe America na Agha Vietnam. N'oge njem ahụ, ọ zutere ọtụtụ ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe, dị ka Martin Luther King, Jr., Robert McNamara, na Pope Paul nke Isii. Ihe ka ukwuu n'ime afọ iri anọ nke afọ ya nọ na Plum Village dị na France, bụ ebe o guzobere Chọọchị Buda Buddhist, nke kpamkpam nke UBVC.
A kpọrọ Nhat Hanh ka ọ laghachi azụ n'obodo ya na 2005, bụ nke weghachiri nkwụsị ya na Chọọchị Buddhist dị n'otu nke Vietnam. Mgbe ọ laghachiri n'ala nna ya, Nhat Hanh gosipụtara olileanya maka imekorita n'etiti ndị Buddha na ndị ọchịchị Vietnamese ma chọọ ịkwalite okpukpe na nwata (Roscoe nd). Otú ọ dị, ndị isi UBCV lere nlọghachi ya anya dị ka "onye na-adịghị ike na ọbụna" onye Buddha "," na-ekwu na "ọchịchị ndị Vietnam ga-ere Nich Han Nhat Hanh na mba ụwa dịka ihe nkwado nke mmezi mgbanwe a na-eme iji gosipụta mmụba nke nnwere onwe okpukpe na ikike mmadu "(Roscoe nd). Ndị gọọmenti na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị gọọmenti na-ahụ maka ndị ọchịchị na-egwu Nhat Hanh, na-egosipụta onyinyo nke imeghe okwu mkparịta ụka na nke okpukpe. Otú ọ dị, gọọmenti emechaghị ka ọ gbanwee iwu okpukpe na-egbochi ya.
A na-elekarị Nhat Hanh anya dị ka otu n'ime ndị ndú okpukpe kachasị emetụta n'oge a. A na-akpọkarị ya dịka "Buddhist nke abuo a kachasi ama nke uwa" nke Dalai Lama (Roscoe, nd). Ọ bụ ezie na ọ na-enwe mmegide dị ukwuu n'oge ọ bụla ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-akwado okpukpe, a pụghị ịrụ ụka banyere ya. Ka ọ na-ebi na Plum Village, Thich Nhat Hanh na-agagharị ugboro ugboro, na-enye okwu udo, na-akwado nkwado, ma na-enye ndị nduzi ime mmụọ na ndị mgbasa ozi mkparịta ụka, site na Ram Dass na Oprah Winfrey.
Ọ nọgidere na-akwalite ọtụtụ mmegharị udo n'ụwa nile, ma sonyeere arụmụka banyere iwu ndị agha America na omume na Middle East dịka o mere n'oge arụmụka banyere Agha Vietnam. N'ajụjụ ọnụ Bob Abernethy gbara, Nhat Hanh tụnyere ọrụ United States na Iraq na nke Vietnam, na-ekwu, "Ị kwenyere na ịchọ na ibibi bụ ụzọ ziri ezi. Ma ka ị na-aga n'ihu na ụdị ọrụ ahụ, otú ahụ ka ndị Kọmunist ka ị na-eme, n'ikpeazụ ị ghaghị ịhapụ. M egwu na ị na-eme kpọmkwem otu ihe na Iraq "(2003).
" Art nke Na-echebara Anya "2009, August 15. Plum Obodo. Nweta site na http://www.plumvillage.org/mindfulness-practice.html na 21 March 2013.
Brown, Philip Russell. 2004. Okpukpe Na-ekpe Buddha: A Buddhist Practice for West. Buddhanet. Nweta site na http://www.buddhanetz.org/texte/brown.htm na 19 March 2013.
King, Christopher, 2000. "Okwu Mmalite: Buddha Ọhụrụ." Nweta site na ftp://ttbc.no-ip.org/%A5@%AC%C9%A6U%A6a%A4W%AEy%B3%A1%B8%EA%AE%C6%2F%ABn%B6%C7%A6%F2%B1%D0%B9%CF%AE%D1%C0%5D%202%2F047%20%C2%F8%BBx%20Magazine%2FJournal%20of%20Buddhist%20Ethics%2FJBE%2Fwww.jbe.gold.ac.uk%2F7%2Fqueen001.html na 30 March 2013.
Eze, Robert H. 2001. "Thhat Nhat Hanh: Buda Buddha." Pp. 71-105 na Thomas Merton na Thich Nhat Hanh: Nwee Ime Mmụọ na Age nke Ijikọ ụwa. New York, NY: Ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu, Ltd.
McMahan, David L. 2008. "Nkora Akuko Banyere Mmeko." Pacific World: Journal nke Institute of Buddhist Studies 2008: 131-176.
"Onye Ozizi anyị." Ebe obibi ndị mọnk Blue Cliff. Nweta site na http://bluecliffmonastery.org/sidebar/about-us/zen-master-thich-nhat-hanh na 19 March 2013.
Roscoe, Jared. "Buddha, n'okpuru isi mkpịsị aka Vietnam." N Tricycle.org. Nweta site na http://www.tricycle.com/web-exclusive/buddhism-under-vietnams-thumb?page=0,1 na 3 April 2013.
"Community of Mindful Living" nke Boston Old Path Sangha nke obodo nke uche uche. Nweta site na http://www.bostonoldpath.org/community/ na 21 March 2013.
"Thhat Nhat Hanh." 2009, August 20. Plum Obodo. Nweta site na http://www.plumvillage.org/thich-nhat-hanh.html na 19 March 2013.
"Thhat Nhat Hanh". Nweta site na http://web.archive.org/web/20080102023137/http://www.interbeing.org.uk/teachers/thay.html na 19 March 2013.
"Ụkpụrụ 14 nke Nhat Hanh" nd Oceandrop. Nweta site na http://www.tonglen.oceandrop.org/Thich_Nhat_Hahn_14_Precepts.htm na 21 March 2013.
Na Nhat Hanh, N'ajụjụ ọnụ Bob Abernethy, gbara ajụjụ ọnụ, Okpukpe na ụkpụrụ omume kwa izu, September 19, 2003. Nweta site na http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/episodes/september-19-2003/thich-nhat-hanh/1843/ na 3 April 2013.
"Ihe dị egwu nke Nhat Hanh Organization: Community of Conscious Living." Nd Buddhanet. Nweta site na http://www.buddhanet.net/masters/thich.htm na 19 March 2013.
"Vietnam: Mmechi nke Chọọchị Buda Buddha." 1995, March. Watch Rights Watch. Nweta site na http://www.hrw.org/reports/1995/Vietnam.htm na 3 April 2013.